Inguva yekusimudza Yako RSS Kudya Kubva kune Vakafa | Martech Zone
Kupesana nekutenda kwakakurumbira, anofudza vachiri kungotenderera kumeso kweinternet… kana hazvo pasi pevhu yaro. Zvemukati syndication inogona kunge ichidyiwa nemaapplication nemawebhusaiti kupfuura vanhu vanoshandisa feed reader… asi mukana wekuona kuti zvemukati zvako zvaparadzirwa uye zvinotaridzika zvakanaka pamadhizaini ichiri kubatanidza mazano ezvemukati.
Ongorora: Kana iwe warasika - heino chinyorwa pane chii chinonzi RSS feed.
Ndakakatyamadzwa pandakaona yedu yekare Feedburner account kuti ndione kuti pakanga pachine vashandisi ve9,000 + avo vaiona zvirimo zvedu kuburikidza nefidha yedu mazuva ese… wow! Uye pandakatanga kutarisa kune mamwe masayiti, vaive ne50,000 + vaverengi pane mamwe mablog. Hezvino zvinhu zvishoma zvatakaita kusimudza yedu RSS feed kubva kunevakafa tichishandisa WordPress.
Ita shuwa kuti unazvo post zvigunwe zvakagoneswa pane yako saiti uye wobva wawedzera mamaki anodiwa kuitira kuti zvinyorwa zvako zvive nemufananidzo wakaratidzwa. Izvi zvinogoneka neWordPress nekushandisa iyo SB RSS Fudza Plus plugin yeWordPress kana iwe unogona kunyora rako wega basa.
Shingairira Feedpress kuitira kuti iwe ugone kuteedzera uye kuyera yako feed yekushandisa uye tinya-kuburikidza chiyero, unogona kugadzirisa yako feed URL, uye Push yako feed kune ako masocial chiteshi.
Wedzera chirevo chekopiraiti kana kufonera chiito pazasi pechikafu chako ne WordPress SEO plugin. Isu tinobata vanhu vachiba nekutsikirazve chikafu chedu nguva dzese uye ivo mbeveve zvakakwana kuti vachengetedze copyright yedu pairi kana vachinge vaburitsa.
Wedzera kero yako yekudya kune yako menyu uye uiise kumwe kunhu pane yako saiti uchishandisa wepasi rose chiratidzo cheRSS feeds.
Wedzera anodiwa emusoro mateki kune yako tema pakati pemusoro mateki kuti maapplication uye mabhurawuza awane yako feed kero, iyi kodhi yekero yedu yekudya.
Uraya Feedburner uye uunze FeedPress kuHupenyu:
Isu takadzika Feedburner ndokushandisa Feedpress pane yedu saiti. Iyo izere-inoratidzirwa feed analytics chikuva ine zvimwe zvakakura zvekuwedzera maficha senge kugona kweCNAME yako feed kuitira kuti iwe usatsamire pane iyo yekare feedburner URL. Saka, ndine iyo subdomain https://feed.martech.zone seta yedu yekudya!
Heano maitiro ekushandura yako saiti kuita Feedpress:
FeedPress ine toni yezimwe sarudzo yekugadzirisa uye kugadzirisa yako feed.
Social Media Kuburitsa - FeedPress zvakare ine inoshamisa kubatana kwenhau uko iwe kwaunogona kushambadzira otomatiki zvese zvichangoburitswa zvemukati pane ako ese eruzhinji media account.
Fudza Kuchengeta - yekufambiswa uye kwakaringana kushuma pamusoro pekuti vangani vanyorese vauinavo, kupi, uye sei avo vanyori vari kushandisa yako feed.
Email Tsamba - Yemahara kune 1000 vanyoreri kana vashoma. Gonesa yavo yemapepa ficha uye tora yavo yekusaina fomu kodhi kuti uise iyo pane yako wega saiti.
Push Notifications - Anoshingairira kusundira notices kuburikidza nePubSubHubbub kuzivisa vanonyorera vekudya zvemukati zvako zvitsva.
Zvemukati Kugadziriswa - Wedzera zita uye logo, truncate yako zvemukati, gadzirisa yakaverengwa yakawanda zvinyorwa, gadzirisa iyo nhamba yezvinyorwa.
Chitupa Chakachengeteka - Kuteedzera kweSSSL yekuwedzera kutakura.
Google Analytics Kubatanidzwa - Automated UTM yekuteedzera kana feed vaverengi vanodzvanya kuburikidza newebsite yako.
Zvimwe Zvimiro - Chikafu chako chinogona kudyiwa muXML, JSON, kana HTML.
WordPress Plugin - Kana iwe uri paWordPress, ivo vanopa plugin yekuita kuti zvinhu zvive nyore!
Saina Kuti Uwane FeedPress
Ongorora: Ini ndasanganisira yakabatana URL ye Feedpress - uye kurudzira pro chikuva!
Tags: tsivakunyorera rss xmlchinja kubva feedburner kuenda feedpresschikafufeed iconfeedburnerfeedlyfeedpresstag yemusoro we feedmaitiro ekuwedzera copyright kune yako feedmashambadziro sei kumagarirojson feedrss feedrss iconrss kumagarirorss xmlsb rss feed plus pluginWordPressWordpress plugin